Home TOMPONA Tantara Quique Setien Childhood plus Untold Biography Facts
LB dia manolotra ny tantaran'ny tompon'andraikitra iray amin'ny Football iray nantsoina hoe "El Maestro". Feno manontolo ny tantara Quique Setien Childhood, Biography, Family Facts (Wife, Kids), ray aman-dreny, fiainana tany am-boalohany, ary ireo tranga hafa malaza nanomboka tamin'ny naha-izy azy Aotra tamin'izy lasa Hero. Ity ambany ity ny sary tsy fahita firy amin'ny fiainana voalohany Quique Setien sy sary hafa izay tantara momba azy.
Saripika tsy hita ao amin'ny Quique Setien Early Life and Untold Life Tantara. Credits: Twitter, Picuki ary MurciaPlaza
Eny, fantatry ny rehetra ny mpitantana fRom Cantabria fianakaviana niaviany dia talen'ny "Tiki-Taka or Tiqui-Taca", iray amin'ireo antony nahatonga azy nandresy tamin'ny tafatafa mba ho lehiben'ny FC Barca. Na dia izany aza, vitsy ihany no mihevitra ny dikan-tenantsika Biolojia Quique Setien izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantara Quique Setien Firaisan'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fiainana tany am-piandohana sy Family Background
Nanomboka, ny ray aman-drenin'i Quique Setien taorian'ny nahaterahany dia nanome ny anarany hoe "Enrique Setién Solar"Ary TSY ilay malaza"Quique Setién" fantatrao. Ny Manager Espaniola dia teraka tamin'ny andro faha 27 ny volana septambra 1958 tamin'ny reniny, tao Santander, Espana Avaratra. Ity ambany ity ny fomba fijery mahafinaritra amin'ny Santander- Izay niavian'ny fianakavian'i Quique Setien.
Ny fomba fijery mahafinaritra amin'ny Santander izay niavian'ny fianakavian'i Quique Setien. Trosa: Wikipedia
Santander dia tanàna seranan-tsambo iray any andrefan'i Bilbao ary malaza amin'ny toerana fanaovana trano fivarotan-dranomasina eropeana. Ny fianakavian'i Quique Setién dia voalaza fa isan'ireo fianakaviana centric Football malaza indrindra avy ao an-tanàna.
Quique Setién dia lehibe tao anatin'ny fianakavian'ny fianankaviana an-trano niaraka tamin'ny rahalahiny roa sy ny ray aman-dreniny. Fantatrao ve?… Iray amin'ireo ray aman-drenin'i Quique Setien (ny mamanany) namoy ny ainy fony izy mbola kely. Izay zaza niaina namoy ny reny dia tsy mahalala afa-tsy ny fanaintainan'ny fihetseham-po lalina sy ny vokatr'izany fahasimbana ara-tsaina izany. Mampalahelo fa ity no niaretan'ny mpiasan'ny FC Barcelona tamin'ny naha-zaza azy.
Tantara Quique Setien Firaisan'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fanabeazana sy fanabeazana
Miala amin'ny aorian'ny fanalan'ny ray aman-dreny: Ny filalaovana baolina ao amin'ny zaridainan'ny fianakaviany miaraka amin'ny dadany sy ny rahalahiny dia lasa loharanom-pahalalahan'i Quique Setien irery tsy lavitra ny zava-tsarotra nampirehitra azy.
Ny fanaovana baolina kitra no fototry ny fiainany hatramin'ny fahazazany. Asides football, Nianatra milalao chess koa i Quique Setien miaraka amin'ny fanampian'ny dadany. Rehefa nandeha ny fotoana diafikatsahany hahazo fanabeazana baolina kitra dia nanjary lojika ary nanjaka tamin'ny Chess. Ny fikatsahana ny fanabeazana baolina kitra dia nahita ny dadany misoratra anarana amin'ny fitsapana baolina kitra azo alaina.
Manodidina ny Jolay 1972, ao afovoan-tanànan'i Ady mangatsiaka, Quique Setien dia efa nisoratra anarana tamin'ny SD Casablanca. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy, dia nandroso nankany Perines, club hafa iray eo an-toerana, any amin'ny tanàna nahaterahany. Tamin'izany, voafetra ny fahaizany milalao satria tsy nanana talenta manokana izy. Quique Setien tamin'ny andro voalohan'ny baolina kitra dia mbola tsy afaka nifehy ny fiankinan-doha amin'ny Chess. Nanapa-kevitra izy fa hifanaraka amin'ny fanatanjahantena roa tonta. Soa ihany fa tsara izy rehetra. Raha niresaka ny traikefa dia nilaza izy indray mandeha;
“Na dia liana amin'ny baolina sy chess aza aho. Fantatro fa izay rehetra ilaiko dia ezaka mafy natao mba hivoarana amin'ny Chess. Ary koa, tsy nanam-potoana firy tamin'ny baolina kitra koa aho.
Indraindray dia nifoha tamin'ny alina aho, talohan'ny lalao, nieritreritra hetsika chess iray na hafa. Nilalao chess nandritra ny ora maro aho nandritra ny fotoana nandaniako azy tamin'ny baolina kitra ary niasa ”
Ny tsy fahampian'ny fifantohana raha teo anelanelan'ny Chess sy ny baolina kitra no antony lehibe nahatonga an'i Setien ho mpilalao antonony nandritra ny androny. Satria tsy manankarena loatra ny ray aman-drenin'i Quique Setién, dia nanapa-kevitra ny hahita asa izy. Nanomboka niasa tao amin'ny College of Pharmacists sy Santander izy tamin'ny faha-14 taonany. Ilay prodigy mahay talenta niasa, nilalao baolina kitra sy Chess amin'ny fomba somary milamina kokoa. Nivily teo anelanelan'ireo hetsika ireo izy tamin'ny nahazoany ny diplaoman'ny oniversite.
Tantara Quique Setien Firaisan'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fiainana karam-be
I Setien dia nanomboka ny asany tamin'ny alàlan'ny klioban'ny tanàna an-tanindrazana, Racing Santander, ary nanao ny taolam-pamantaran'i La Liga tamin'ny 1977. Manan-talenta afovoany manan-tsaina izy ary manana tanjona tsara ho an'ny tanjona. Vao maraina i Setien dia nidera ireo sampiny; hoditra ary Johan Cruyff izay lasa angano nilalao ho an'ny FC Barcelona tamin'izany. Sary an-tsary eto ambany, niainga avy tamin'ny mpilalao tsotra iray izy mba ho lasa kapiteny miaraka amin'ny fikambanana.
Saripika tsy fahita firy an'i Setien nandritra ny andro nilalaovany tamin'i Racing Santander. Nitsangana avy tamin'ny mpilalao iray ho any amin'ny kapiteny ary sata an'ny klioba izy. Sary: FCBarcelona
Nampiasa ny fahalalany Chess i Quique Setién Cruyff ny atidoha Lalao fampilalaovana Football sy Fluid System. Nanjary niharihary io fomba io tamin'ny fotoana nilalaovany ho an'ny Athletico Madrid teo anelanelan'ny taona 1985 ka hatramin'ny 1988 izay nanampiany ny ekipany handresy ny Super Super Cup. Sary eto ambany, nilalao baolina kitra toa azy i Quique Setién. Namaky tsara ny lalao izy na dia nanohitra ireo mpanohitra lehibe toa an'i Barcelona aza. Fantatrao ve? ... Nahazo fandresena 5 i Setién tamin'ny FC Barcelona nandritra ny filalaovany azy.
Saripika iray tsy fahita firy an'i Setien raha nampijaly an'i Barcelona Barcelona nandritra ny andro nilalaovany. Sary: todocoleccion
Ny havan'i Quique Setién no fananany sarobidy indrindra nandritra ny andro nilalao azy. Ireo izay nahalala azy taloha dia nilaza fa ny fomba filalaovany dia mampifangaro ny hatsaran-tarehy a Rolls Royce amin'ny motera a Mustang. Ny mpilalao midfield midira dia nahatratra 95 in-5 tamin'ny klioba 1996 samy hafa talohan'ny nahantonana ny kirarony tamin'ny taona XNUMX.
Tantara Quique Setien Firaisan'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Road to Fame
Na dia taorian'ny fisotroan-dronono aza dia nanjary tena tiana tokoa ny Cantabrian Johann Cruyff's filozofia lalao. Nasehony indray mandeha ny fiovan'ny zava-drehetra ho azy taorian'ny nijerena ny lalao tany Barcelona Johan Cruyff izay no mpitantana ny club tamin'izany. Ity seho ity dia nahita azy nanaraka ny dian-tongotrany sampy rehefa nanapa-kevitra ny ho tonga mpampianatra izy.
Ny asan'ny mpanazatra an'i Setien dia nanomboka tamin'ny fifaninanana mpankafy ny fianakaviany nialoha ny nifindraany tamin'ny sisin'ny Segunda, Polideportivo Ejido. Mba hahazoana traikefa mpanazatra kokoa dia nandeha tany Afrika Afovoany izy izay lasa mpitantana iraisam-pirenena ho an'ny Guinea Equatorial.
Ny fiatoana voalohany ho an'ny Setien za-draharaha tamin'ny farany dia nitranga tamin'i Lugo izay nitondrany azy ireo any amin'ny Segunda Division. Io fahombiazana io dia nahita azy nahazo karama tamin'ny Las Palmas - club hafa nanampy azy tamin'ny fahaveloman'ny LaLiga. Ary nanadino ny fahombiazany i Real Betis ary nanendry azy ho mpitantana azy. Nanararaotra ny fifanolorany tamin'ny board Las Palmas ny fikambanana, fampandrosoana iray izay nitarika azy nandao ny klioba ho azy ireo (Betis).
Fony tany Real Betis, i Setien dia nampihatra tanteraka ny fetin'ny Chess- Fomba fitantanana rafitra Football sy fluide indrindra amin'ireo fanoherana lehibe kokoa. Ny paikadin'ny FC Barcelona toy izany dia nahita azy manana ny ampahany betsaka indrindra amin'ny fananana Ball voasoratra anarana 54-, 56.9%, 55.9% ary 62.5% (tsirairay avy amin'ny 2015 hatramin'ny 2019).
Amin'ny maha mpanazatra noana anao, dia mbola niandry ny fotoana hilalao an'i Barça i Setién. Na dia very fito aza izy, dia niandry ny hahazo fandresena Camp Nou, dia tamin'ny fomba mahafinaritra.
Tantara Quique Setien Firaisan'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Mitsangàna mba ho ankizilahy
Indro, tamin'ny Novambra 2018, Quanque Setien dia naneso ny olon'i Valverde tamin'ny fandresena 4-3 tao Camp Nou. Fandresena lehibe izany izay nahatonga ny mpilalao FC Barcelona ho reharehan'ny Setien. Nisy ny fanambarany fa resin'i Quique Setien i FC Barcelona tao Camp Nou miaraka amin'ny fanampian'ny Chess.
Nisy ny fanambarany fa resin'i Quique Setien i FC Barcelona tao Camp Nou miaraka amin'ny fanampian'ny Chess. bola: LaLiga
Fantatrao ve?… Setien koa dia nahazo lobaka nosoniavina avy amin'ny Sergio Busquets avy eo niaraka tamin'ny fanoratana mpiasan'ny Barca:
“Ho an'i Quique am-pitiavana sy fankasitrahana amin'ny fomba fijerinao ny baolina kitra. Mirary ny soa indrindra."
Fandresena izay nanampy azy hanangana ny CV maotiny izay nanomboka nanintona an'i FC Barcelona nanomboka ny Janoary 2019. Tamin'ny faran'ny taom-pilalaovana 2018/2019, i Setien dia nanampy an'i Betis hahatratra ny laharana faharoa eo ambonin'ny Madrid raha jerena ny ampahany ambony indrindra amin'ny bola voasoratra anarana (fananana baolina). Rehefa nahatratra io fiakarana miezinezina io miaraka amin'i Betis, FC Barcelona dia tsy nahatohitra ny hanana azy, ka miandry ny fotoana mahamety azy Ernesto Valverde.
Tamin'ny 13 Janoary 2020, noravan'ny FC Barcelona i Valverde taorian'ny faharesena 3-2 tany Atlético Madrid tao amin'ny Supercopa de España. Araka ny efa nieritreretana dia notendrena ho mpanazatra ao Barcelona i Setién tamin'io andro io ihany, ka soloina Ernesto Valverde taorian’ny fandroahana azy. Ny lehilahy teo aloha Betis dia tonga tamin'ny fanetren-tena sy ny toetra, izay niaraka taminy foana nandritra ny androm-piainany. Araka ny UEFA, izao no nolazain'i Setién taorian'ny fanendrena azy;
Omaly dia nandeha an-tongotra niaraka tamin'ny ombivavy tany an-tanànako aho ary androany dia mpanazatra ny mpilalao tsara indrindra eto an-tany! Tiako ny hahazo izay rehetra azoko atao. Ny fikambanana ity dia mitaky ny hihatsara isan-taona ary hanangona tropy maro araka izay azony atao ary milalao tsara.
Raha mpankafy maro no manantena fa tsy hifarana toa an'i Santiago Solari, ny fotoana ihany no hanambara ny fomba hitantanany io andraikitra sarotra sy feno andraikitra io. Araka ny Goal, Lionel Messi tena ho ilay 'MPANJAKA ' ho an'ny Quique Setien chess-obsess.
Messi dia ho Mpanjaka Chess ho an'ny Quique Setien chess-obsess. bola: Goal ary FaceBook
Tantara Quique Setien Firaisan'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Relationships Facts
Miakatra ny lazany ary lasa mpanazatra ao Barcelona, ​​dia azo antoka fa tsy maintsy nieritreritra ny mpankafy baolina kitra raha manana sipa i Quique Setién na raha manambady izy. Tsy misy ny mandà fa ny maha lehilahy nahomby dia tsy hahatonga azy hanana vehivavy (sipa na vady).
Ny marina dia i Quique Setién dia lehilahy ao amin'ny fianakaviana feno. Ny vadin'ny Quique Setien dia i Rosa Manzanera ary mitovy amin'ny fianakaviany Espaniola mitovy amin'ny vadiny izy. Miaraka dia samy manana zanaka roa ny olon-tiany roa; Lalao izay 24 (ny janoary 2019) ary i Sofia kely izay efa ho 11 taona (ny janoary 2020). Ity ambany ity ny sary mahafinaritra an'ny vadin'i Quique Setien, ny lahimatoany voalohany sy i Sofia izay zanak'ilay fianakaviana.
Hihaona amin'ny mpianakavy Quique Setien. Ny vadiny tsara tarehy (Rosa Manzanera), Son (Laro) ary ny zanany vavy (Sofia). Sary: Picuki
Ny vadin'i Quique Setien anisan'izany ny tenany dia mahazo fitahiana amin'ny fananana mpilalao baolina kitra iray amin'ny zanany lahy antsoina hoe. Tahaka ny dadany ihany koa dia lalao i mid. Fantatrao ve?… Ny lalao dia mirakitra ny andiany fahatelo amin'ireo mpilalao matihanina amin'ny fianakaviany. Ny rainy sy ny dadabeny dia samy mpilalao baolina kitra. Ny raiben'ny reny tamin'ny lalao, José Antonio Lozano dia nilalao baolina kitra tamin'ny taona 1960. Azo atao angamba ny milaza fa ny vadin'i Quique Setien dia tonga soa amn'ny fisaorana ny dadany izay mety nampifandray azy ireo.
Misy ny fatorana zanakalahy izay tsara mifampizara Quique Setien sy ny zanany. Noho ny fahafantarana ny dadany dia hahazo ny asan'ny FC Barcelona, ​​dia nanapa-kevitra ny hanao sonia i Laro EU Sant Andreu, ekipa mpilalao baolina kitra Espaniola miorina ao an-tanànan'i Barcelona ao amin'ny distrikan'i Sant Andreu. Nanapa-kevitra ny hijanona eo akaikin'ny ray aman-dreniny, indrindra ny dadany.
Tantara Quique Setien Firaisan'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fiainana manokana
Raha ny momba ny toetrany dia tsy miangatra ny manontany; Iza moa i Quique Setien?… Ankehitriny Araka ny SportsMole, ny mpitantana za-draharaha dia ny olona mandany seho be amin'ny androny milalao chess aorian'ny lahasa baolina kitra.
Fantatrao ve?… Quique Setien dia fantatra fa manana nilalao nanohitra ireo tompon-daka teo amin'ny tontolo chess teo aloha Anatoli Karpov (sary etsy ambany) sy Garry Kasparov, na dia tsy mbola nipoitra aza ny valin'ny fivorian'izy ireo.
Quique Setien dia nilalao Chess tamin'ireo mpanafika teo amin'ny tontolo chess teo aloha Anatoli Karpov. bola: Clarin
Ny fianakavian'i Quique Setien sy ny fitiavan'izy ireo ny datin'ny chess hatramin'ny 1972. Nankasitrahan'ireo mpankafy ny IQ matanjaka sy ny fahaizany manampahaizana mba hifamatotra amin'ny fahaizany chess.
Ny zava-misy faharoa tokony haseho momba an'i Quique Setien ny fiainana manokana dia ny fitiavany lehibe ny zaza. Dada madama manatanteraka ny andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny ankizy kely etsy ambany.
Fantatrao ny fiainana manokana Quique Setien- Tiany milalao baolina amin'ny ankizy kely. Credit: MurciaPlaza
Tantara Quique Setien Firaisan'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny vadin'i Quique Setién dia teratany Murcia. Rosa Manzanera dia olona tsy tia tena izay tsy manao afa-tsy ny fanohanana ara-pihetseham-po amin'ny vadiny na dia ianao aza dia midika hoe mitazona ny fiainany manokana na dia tsy tia baolina kitra loatra aza izy. Tahaka ny ankamaroan'ny mpitantana, ny vadin'i Quique Setién dia nanaraka azy foana tamin'ny diany rehetra tamin'ny taranja baolina kitra hatramin'ny andro voalohany tsy naha-mpanazatra azy.
Ity sary Quique Setien Family ity dia manaporofo fa rainy be fitiavana izy. Sary: Picuki
Quinque sy ny vadiny dia nankasitraka ny fifandraisan'i Laro tamin'ny tovovavy sakaizany Paula Gomez. Sary eto ambany, samy antoko Mampiorina ny fahatokisan'ny tsirairay ao aminy, ka mamela ny mpankafy tsy isalasalana fa ny fanambadiana dia mety ho dingana ara-pomba manaraka.
Nankatoavin'ny ray aman-dreniny ny lalao
Tantara Quique Setien Firaisan'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Lifestyle
Ny fahafantaranao ny zava-misy iainana Quique Setien 'dia hanampy anao hahazo sary tsara kokoa ny fitsipi-piainany. Manomboka, Quique Setien miaina fiainana voalamina, tsy misy fandaniam-bola tsy ara-potoana sy fananana tranobain-dry zareo lehibe toy ny trano.
Ny fiainana miaina manetry tena Quique Setien dia azo fintinina amin'ny sary eto ambany. Nalaina sary tao amin'ny trano niaviany izy, teo am-pisakafoanana ny Soavaly Fotsy fotsy be Espaniola tiany indrindra, Kale ary Chorizo ​​(na Bizina). Vadin'i Quique Setien (Rosa Manzanera) mamahan-kanina espaniola tortillas izay tena tiany.
Fantatrao ve?… Setien Miaina fiainana ambany fanetren-tena ary tiany ny lovia nentin-drazana toy izany
Mbola manandrana fomba fiaina Quique Setien dia mety ho fantatrao izay mitondra ny mpitantana baolina kitra. Nandritra ny tany Betis, Quique Setien dia niarahaba ny mpanamboatra fiara tao Alfa Romeo ho an'ny klioba. Raha naka fiara ho an'ny fihenam-bidy marobe ny mpilalao dia nanana ny iray ho an'ny tenany ihany koa izy. Ity ambany ity ny tompon'andraikitra amin'ny baolina kitra ambany izay miasa amin'i Alfa Romeo izay nanandrana nanodina ny fiarany.
Quique Setien Car- izy dia tia an'i Alfa Romeo. Credits: Atlantico
Tantara Quique Setien Firaisan'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Facts hafa
Sekoly Football: Manana sekoly baolina kitra toa ny ankamaroan'ny mpilalao baolina misotro ronono izy. Misaotra indrindra amin'ny Ny vadin'i Quique Setien, tompon'andraikitra Espaniola dia nanapa-kevitra ny hametraka ny sekolin'ny baolina kitra ao an-tanànany. Sary an-tsary eto ambany (sy ao amin'ny fizarana fiainany manokana) dia tiany ny mandray anjara amin'ny fiofanana sy ny fanatsarana ny zaza izay mahita azy toy ny raim-pianakaviana.
Quique Setien dia manana sekolin'ny baolina kitra ary manompo amin'ny raim-pianakaviana, ray aman-dreny faharoa sy fianakaviana ho an'ny ankizy kely. Credit: Twitter
Ny mpanazatra an'ny Cantabrian fahatelo hanofana an'i FC Barcelona: Araka ny tranonkalan'ny FC Barca, Setien no mpanazatra Cantabrian fahatelo amin'ny tantaran'i Barça, taorian'ny niandraikitra teo aloha; Enrique Orizaola (voatendry 1961) sy Laureano Ruiz (voatendry 1976). Izy no tena voalohany hatramin'ny taon-taona vaovao.
fivavahana: Quique Setien dia tena nobeazina nitaiza katolika, midika izany fa mampihatra ny fivavahana kristiana izy. Eto dia izao no zava-misy momba an'io fanamafisana io. Araka ny SantanderTrade tranonkala, ny tanàna niavian'ny fianakavian'i Quique Setien dia misy ny katolika 77% (fampiharana 50%). Raha ny 3% ny silamo sy ny protestanta dia 19% ny tsy mpino no XNUMX%. Noho izany, tena azo inoana fa ny vadin'i Quique Setien anisan'izany ny tenany dia manatrika ny fiangonana katolika.
Tattoo: Ny kolontsaina tombokavatsa dia be mpitia amin'ny ankamaroan'ny mpilalao baolina kitra ary tsy dia eo anelanelan'ny mpitantana satria matetika no entina hanehoana ny fivavahan'ny iray na ny olona tiany. Quique Setien dia iray amin'ireo mpitantana izay te-tsy manao tombokavatsa-jaza.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Quique Setien Childhood Story Plus Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. Raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia miangavy anao hizara izany amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hajainay sy hajainay foana ny hevitrao.
Luis Suarez Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny tantaram-piainan'i Paco Alcacer momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa